कोभिड १९ को प्रभावले समर्ग अर्थतन्त्र नै २० प्रतिशतले खुम्चिएको अवस्था थियो । नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो छैन । कोभिड अघि ७ प्रतिशतको हाराहारीमा भइरहेको जीडीपी ग्रोथ (आर्थिक वृद्धि) कोरोनाको दोस्रो लहरमा पनि ३.९ प्रतिशतको देखिएको थियो । यो ग्रोथ पनि सरकार र राष्ट्र बैंकले झण्डै ५ प्रतिशत बढी...
निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने २० वटा कम्पनीका सिईओहरुको छाता संस्था हो नेपाल बीमक संघ र त्यसको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्, चङ्की क्षेत्री । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीका सीईओ समेत रहेका क्षेत्रीलाई आफ्ना कुरा स्पष्ट रुपले राख्न सक्ने व्यक्तित्वका रुपमा चिनिन्छन् । कोरोना बीमाको बाँकी दावी भुक्तानी, पुनर्बीमा सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था,...
“पार्टीले जनयुद्धको भावअनुसार काम गर्न पनि छाड्यो । कार्यकर्ता झोला बोकेर ठूला नेताको चाकरी गर्नमा मरिमेट्न थाले । जसले गर्दा धुपौरेगिरि गर्ने र ‘एसम्यान’ भएर मात्रै जिन्दगी चलाउने प्रवृत्तिको विकास हुँदै गयो ।'” – लोकेन्द्र विष्ट मगर चार दशक लामो राजनीतिक जीवनमा दुईपटक मन्त्री भइसकेपछि पनि राजनीति छोडेर कृषि...
नेपालको समग्र बिमा क्षेत्रले सात दशक पार गरिसकेको छ । जीवन बिमाको अनुुभवसमेत ५ दशक लामो भइसकेको छ । वि.सं. २००४ मा नेपाल बैंकको सक्रियतामा नेपाल माल चलानी तथा बिमा कम्पनी (वि.सं. २०४८ मा परिवर्तन गरेर नेपाल इन्स्योरेन्स) को स्थापना भएदेखि औपचारिक रूपमा नेपालमा बिमाको सुुरुवात भएको हो ।...
राजश्व, पुँजीगत खर्च, बैंक ब्याजदर र आयात प्रतिस्थापनका उपाय
मंसिर २६ गतेसम्म सरकारको पूंजीगत खर्च जम्मा ६.१३ प्रतिशत मात्रै भएको छ । विप्रेषण आप्रवाह पनि ७६ प्रतिशतले घटेको छ । बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत नाघेको छ । नयाँ र पुराना कर्जा नविकरण गर्नुपर्दा चार महिनामा औसत ४ प्रतिशतले ब्याज बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना...
सेयर बजार अर्थमन्त्रीले घटायो भन्छन् तर कसले घटाउँछ ? मन्त्रीले त पटक पटक लगानकर्ताको लगानीको रक्षा गर्ने संरक्षण गर्ने कुरामा अर्थमन्त्रालय गम्भीर भइरहेको छ भनेर प्रतिबद्धता बारम्बार गरिरहेको छ । संस्थाहरुमा सुधार गर्नका लागि त्यहाँ भएका ट्रेडिङ्गका आन्तरिक समस्याहरु जे जति आएका छन् त्यसलाई सुधार गर्नका लागि प्रयास भएको...
काठमाडौं । सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षबाट भिष्मराज ढुंगानालाई २०७८ भदौ १६ गतेदेखि निलम्बन गरेपछि बोर्ड सञ्चालक समितिको अध्यक्षता गर्दै आएका छन् शोभाकान्त पौडेलले । उनी नेपाल सरकारको सहसचिव हुन् र हाल आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा छन् । उनै पौडेलले मंसिर २३ गते अर्थ समिति बैठकमा राखेको धारणाले...
‘पुँजी बजारले ८० प्रतिशत मानिसलाई भोकै/नाङगै पार्छ, त्यसका विरुद्ध लड्नुपर्छ’
पहिले पुँजीको लगानी उद्योग र उत्पादनमा हुन्थ्यो । त्यहाँबाट आउने नाफा पुँजीपतिहरुले लिन्थे । आजभोली पुँजीको लगानी उत्पादनमा हुँदैन् । पुँजीको लगानी पुँजीमै हुन्छ । वित्तिय पुँजीवादको मुख्य विशेषता यहि हो की पुँजीको लगानी पुँजीमै हुने र त्यहिबाट नाफा कमाउने । अहिले हेर्ने हो भने धितोपत्र बोर्ड, सट्टा बजार,...
‘मासिक १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नुको जिम्मेवार मै हुँ’
अर्थतन्त्र आफैँमा चुनौतीरहित कहिल्यै पनि हुँदैन । सर्वदा चुनौतीहरू भइरहेका हुन्छन् । त्यस्ता चुनौतीहरूलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने प्रश्न नै मुख्य कुरा हो । यी चुनौतीहरू आज जे देखिएका छन् वर्तमानमा यी आजका आजै बनेका चुनौती होइनन् । हिजोका अर्थनीति, योजना र कार्यान्वयनको परिणाम आज हामीले भोगिरहेको अवस्था हो...
व्यापार नाफाका लागि गरिन्छ । तर, कहिलेकाहीँ घाटामा पनि जान्छ । अब सारा विश्व नै एक बजार भइसकेको छ । कुनै पनि देश एउटा व्यापारिक निकाय पनि हो । व्यापारमा संलग्न हुँदा देशलाई पनि नाफा/घाटा भई नै हाल्छ । तर, निरन्तर घाटा मात्रै भइरह्यो भने टाट पल्टिने स्थिति बन्छ...